Gbasara anyị - Dingzhou City YouYou Metal Products Co., Ltd.
Anabata gị (GROUP) metal metal ...
• Ejiri 1989
• Ntu & ịghasa & Waya Ma machete Manufacturer
• 26Ndị ọrụ 0+
• Kedu ihe bụ ISO 9001 Quality Management Systems
• SGS Gbaara
• Onwe ha na ezinụlọ nwere
Akara nke Mmepụta
Guzobe na 1989, YouYou (Otu) Ọla na-etinye oke mkpa maka mmụba na nkwalite ngwaahịa na akụrụngwa ngwaahịa. Anyị merela agadi ụlọ ịbịaru, ntu, galvanization, ọgwụgwọ okpomọkụ, ọgwụgwọ elu na ihe nchebe gburugburu ebe obibi, nke na-agbaso ụkpụrụ nchebe gburugburu ebe obibi nke mba na-etinyekarị na mbọ mbọ.
Ngwaahịa kachasị gụnyere ntu nchara ojii, ntu aka, ntu waya nkịtị, ntu ntanị, gypsum ịghasa, nkedo chipborad, waya galvanized, waya annealed ojii, waya mkpuchi pvc, waya nwere waya, waya agịga, igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, na iche iche iche iche nke waya ntupu, wdg rere nke ọma ná mba ahụ dum, 70% nke ngwaahịa na-exported na n'ụwa nile, Dị ka Europe, America, Africa, na Middle East na South East Asia, wdg
YouYou Metal na-eleba anya na mmepe nke teknụzụ.Innovation, development and research are essential essential at YouYou.In 2010, anyi nakweere uzo nke oku oku nke Gas, anyi wuru sistemu ogwu nke anyi, na eme ka ngwa ahia anyi karie gburugburu ebe obibi. enyi na enyi, yana inye aka na nkwado nke akụnụba mpaghara.Ihe ohuru a mere ka oru oma meputara, belata onu ogugu, nwekwuo ntu na waya, nye anyi ohere inweta uzo ma mebe ntoala nke mmeputa.
All ọrụ nke YouYou (Group) ọla na 2020 na-agbalịsi ike iji nweta ihe mgbaru ọsọ nke 600 nde yuan kwa afọ kwa afọ mmepụta uru n'ime afọ atọ na-atụ anya na ahuhu.
YouYou (Otu) ọla na-ewe "njikwa zuo oke, ibe na-erite uru, na-emepe emepe ọnụ" dị ka ya ụkpụrụ, na-arapara n'ahụ ndị isi ụkpụrụ nke "na-emeso anyị ahịa na ezi obi", na-ewere "elu àgwà ngwaahịa na ịrụ ọrụ" dị ka ya echiche.Anyị na-agba mbọ ịbụ onye isi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ yana ngwaahịa anyị na-azụlite yana ndị ahịa na-ahụkarị.